EKUGCINENI SEKUZOKHANYA - Umbele I SMME Profiles I Labour I Economics I Agriculture I Executive Interviews I Personal Finance News
UKUWA komnotho emhlabeni ngo-2008 okwadalwa wukwehla kwamanani emkhakheni wamabhilidi nezindlu nokuhluleka ukukhokha izikweletu kwabantu base-USA kwazwela naseNingizimu Afrika.
Imibiko yaveza ukuthi bawu-1 million abantu abaphelelwa wumsebenzi ngenxa yaloku kuwa komnotho okwaqhubeka izinyanga eziwu-18.
Ingcindezi emnothweni wezwe yafakwa kakhulu nawukuthi ngo-2008 yiwona nyaka okwaqala ngawo iziqubu zokucinywa kukagesi, i-load shedding.
Emva kweminyaka ewu-13 kwaqala ukucinywa kukagesi kubonakala sengathi sesitholakele isisombululo. Izolo uMengameli uCyril Ramaphosa noNgqongqoshe wezokuMbiwa Phansi namaNdla uMnu uGwede Mantashe bamemezele ushintsho emthethweni olawula ugesi, i-Electricity Regulation Act.
Bathe abaphehli bakagesi abazimele, njengezimayini nezinye izinkampani, sebezovunyelwa ukukhiqiza ugesi owu-100MW kusuka ku-1MW ovumelekile njengamanje. Laba baphehli bazovunyelwa nokuthi bawudayise lo gesi, inqobo nje uma begcine kahle zonke izimiso futhi bebhalisile.
Lesi yisinyathelo esimqoka, esijika izinto nesizovuselela ithemba emnothweni waseNingizimu Afrika. Bese kunesikhathi kunomdonsiswano ngalolu daba phakathi kukaMantashe nemboni ezimele.
UMantashe ubethi imboni ezimele izogunyazwa ukuthi inyuse ukukhiqiza ugesi kufinyelele ku-10MW kuphela. URamaphosa uthe: “Lesi sinqumo sitshengisa ukuzimisela kwethu ukuthatha isinyathelo esifanele ukuze sibe nogesi owanele sinciphise umthelela wokucinywa kukagesi ezinkampanini nasemakhaya ezweni lonke.”
Kuleli sonto ugesi uyacinywa ngoba kunama-generator angasebenzi kwezinye zeziteshi zikagesi futhi kukhona nengqalisizinda yakwa-Eskom elungiswayo.
Ukucinywa kukagesi kuleli sonto kuzoqhubeka kuze kube yiSonto futhi kuphakathi kwesigaba sesibili nesesine, nokusho ukuthi kwesinye isikhathi ucinywa kabili ngosuku.
Mkhulu umonakalo odalwa wukuhamba kukagesi futhi kuhlukumeza wonke umuntu – ontulayo nocebile. Kuxosha abatshalimali, kulimaza impahla esebenza ngogesi emakhaya, kwengeza izindleko kosomabhizinisi kanti kwabanye kuwisa amabhizinisi abo.
Sekucacile ukuthi ukuthembela ku-Eskom wodwa akulisizi izwe, kunaloko kuliyisa eweni. Abangahambisani nalesi sinqumo bathi loku kuzolimaza abantulayo ngoba ugesi ozodayiswa ngabaphehli abazimele uzobiza.
Abantulayo vele bayalimala ngokuhamba kukagesi. Ukuxosha abatshalimali abanqena ukucinywa kukagesi kusho ukuthi imisebenzi ebingaba khona iyancipha futhi kunciphisa nentela ebingaqoqwa wuhulumeni.
Awucabange umbhaki osafufusa ongenawo amandla okuthenga i-generator okuvele kuhambe ugesi amakhekhe engakavuthwa? Singabala nezinye izibonelo kuze kushone ilanga.
Akukaze futhi kwaba yinto embi ukwandisa ukuncintisana emnothweni. Kunaloko umthengi ugcina esizakele uma kungasakhonyi inkampani eyodwa.
Nakuba kusazothatha isikhathi ukuthi laba bapheli badayisele abathengi ugesi kodwa kuyathokozisa ukubona igcina isukunyelwa okwangempela inkinga kagesi.
Ukubalekela ukubhuquza ekhaya ngenkathi esafuna umsebenzi kwamenza wachitha isizungu ngokubhaka. Umndeni nabangani bameluleka ukuthi aqale ibhizinisi lokubhaka. Manje lisimama wena owabona inhlama ikhukhumala. Uxoxe noSLINDILE KHANYILE